Mahesh | Mahesh Pathak
All posts by Mahesh
म त एक आम नेपाली मलाई के फाइदा डा. केसीको अनशनले?
October 4, 2016 campaign, UncategorizedMahesh
यो प्रश्नको उत्तर पाउन पहिले तपाइँ आफैले आफैसँग यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु पर्छ।
१) के तपाईलाई अस्पतालबाट क्लिनिकमा रिफर गरिएको छ?
२) के तपाईलाई डाक्टरले हतार-हतारमा जाँचेर धपाएको छ?
३) के तपाईलाई आफ्नो जाँच रिपोर्ट एउटा डाक्टरमा पत्यार नलागी फरक फरक डाक्टरलाई देखाउनु भएको छ?
४) के तपाइंले मनमनै कुनै अस्पताललाई ‘ठग’ भन्नु भएको छ?
५) के तपाईलाई आमा-बा बिरामी हुँदा ‘खेतबारी बेच्नु पर्छ कि क्या हो’ जस्तो भको छ?
६) के तपाईले वा तपाईको छोराछोरीले डाक्टर-नर्स बन्ने सपना पैसा तिर्न नसक्ने भएकै कारण मार्नु परेको छ?
७) के तपाइँले औषधी पसलेलाई सोध्नु भा’छ “यो औषधी त अल्ली महँगो रहेछ। अलि सस्तो खाले छैन?”
यदि माथिका प्राय प्रश्नमा तपाईको उत्तर “हो” “भा छ” “ठिक” जस्ता छन् भने तपाइले पक्कै बुझ्नु हुनेछ डा. केसीको अनशनको मर्मलाई।
युरोप, क्यानडा, केन्या, दक्षिण अफ्रिका लगायत देशहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज मात्र छन्| तर नेपालमा भने अहिले सम्म १७ ओटा निजि मेडिकल कलेज हुँदा जम्मा ३ ओटा सरकारी मेडिकल कलेज छन्। निजि मेडिकल कलेजहरुले लुट नै मच्चाएका छन्। एक जना विद्यार्थीले निजि मेडिकल कलेजबाट विशेषज्ञ डाक्टर बन्नको लागि १.७ करोड देखि २.६ करोड सम्म खर्च गर्नु परिरहेको छ। MBBS गर्नको लागि मात्रै पनि ५०-६० लाख लाग्ने गरेको छ।
यति धेरै लगानी गरेर डाक्टर बनेपछी के त्यो डाक्टरले गाउँमा गएर बिरामीको सेवा गर्न सक्छ त? बिरामीले खाने औषधी र प्याथोलोजीमा गर्ने स्वास्थ्य परिक्षणमा कमिसन खांदैनन त?
सबै भन्दा सुरुमा पढ्नको लागि लागेको लगानी त उठाउने पर्यो नी, होइन र?
तपाईको छोराछोरी वा आफन्तको पनि रहर होला डाक्टर बन्ने। के उनीहरुलाई डाक्टर बनाउन १.७ देखी २.६ करोड सम्म खर्च गर्न पर्नु जायज छ? के एक जेहेन्दार विद्यार्थीले पढाई महँगो भएकै कारण डाक्टर बन्ने सपना मार्न पर्नु उ माथीको अन्याय होइन? के उसको पढाई राज्यको कर्तव्य होइन?
हो, डा. केसी नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको यही लुटतन्त्रको विरुद्ध आमरण अनशन बस्दै हुनुहुन्छ। तपाई कै लागि संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। के उहाँलाई साथ दिनु तपाईको कर्तव्य होइन?
थप जानकारीको लागि :
विवेकशील नेपाली, मकवानपुर
संपर्क : 985-5031512 (विवेकशील हटलाइन) , 984-5535512 , 984-5118597, 9855070597
हेटौंडाका इ-रिक्सा चालक मनोज साहको जीवन कथा
August 30, 2016 Inspirational Stories, Uncategorizedछोरीलाई पढाउने बाबु, जिम्मेवार अभिभावकMahesh
मनोज साह, उहाँको इ-रिक्सामा
नाम: मनोज साह
पेसा: इ-रिक्सा चालक, हेटौंडा
“३० वर्ष भयो हेटौंडा आएको। हेटौंडा, कर्रामा बस्छु। म हेटौंडामा आउँदा हेटौंडा जंगल जस्तो थियो। झन कर्रा, गर्दोही क्षेत्रमा त्स एउटै घर थिएन। हेटौंडा यस्तो ठुलो शहर बन्ला भन्ने कल्पना पनि थिएन।
मेरा २ छोरीहरु छन्। जेठी छोरी १२मा पढ्छे र कान्छी ११ मा पढ्छे। दुबैले राम्रो अंक ल्याएर SLC पास गरेर अहिले व्यवस्थापन संकाय पढ्दै छन्। म मेरा छोरीहरुलाई पढाएर सक्षम बनाउन चाहन्छु ताकी उनिहरुले जागिर गर्न सकुन र आफ्नो भविष्य आफैं बनाउन सकुन्।
Continue reading हेटौंडाका इ-रिक्सा चालक मनोज साहको जीवन कथा →
अन्तर-व्यक्ती संबन्ध राम्रो बनाउने विवेकशील मन्त्र – समानुभुती
August 23, 2016 Bibeksheel Mantra, UncategorizedसमानुभुतीMahesh
कुण्ड-कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बिचार भनेझै सामाजिक जीवनमा व्यक्ती-व्यक्तीका बिचारमा भिन्नता देखिनु स्वभाविक हो। हरेक मान्छेको जिन (gene) र सामाजिकिकरण अलग-अलग हुने भएकोले बिचारको विविधता अवश्य हुन्छ। विविध परिस्थितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विविधता अवश्य हुन्छ। यसरी, बिचार अलग हुँदा, कार्य पनि अलग हुन्छन र एकले गरेको कार्य अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ। यसैले गर्दा कहिलेकाँही गम्भिर अन्तर-द्वन्द सिर्जना हुन्छ।
यी परिस्थितिमा समस्या समाधान गर्दै अन्तर व्यक्ती संबन्ध जोगाउने सबैभन्दा उत्तम बाटो समानुभुतीबाट नै निस्कन्छ। कसरी?
Continue reading अन्तर-व्यक्ती संबन्ध राम्रो बनाउने विवेकशील मन्त्र – समानुभुती →
समानुभुती – एक विवेकशील मन्त्र
August 19, 2016 Bibeksheel Mantra, Uncategorizedविवेकशील मन्त्र, समानुभुतीMahesh
विवेकशील नेपाली भन्नु र बन्नुमा फरक छ। तपाई विवेकशील बन्न तपाईले विवेकशील मन्त्रहरुलाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। विवेकशील मन्त्रहरु: निष्ठा, पारदर्शिता, उत्कृष्टता, साहस, विनम्रता र समानुभुतीलाई।
यी मन्त्रहरु मध्य यस लेखमा समानुभुती को बारेमा चर्चा गर्दै छु।
समानुभुती भनेको के हो?
अरुको दु:ख वा भावनालाई अनुभव गर्नु तथा बुझ्नुलाई नै समानुभुती भनिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा empathy भनिन्छ। समानुभुतीमा २ कुराहरु जोडिएका हुन्छन्: पहिलो समानुभुती राख्ने व्यक्तीले अरुले जस्तो महशुस गर्दै छ, त्यस्तो महशुस गर्दछ, र दोस्रो उसले अर्कोको के-कस्तो महशुस गर्दैछ भनेर बुझ्दछ। Continue reading समानुभुती – एक विवेकशील मन्त्र →
के रिचार्ज कार्ड नङले कोर्दा क्यान्सर हुन्छ?
August 17, 2016 Interesting facts, UncategorizedMahesh
रिचार्ज कार्ड नङले कोर्दा क्यान्सर हुन्छ भन्ने हल्ला तपाईले पनि पक्कै सुन्नुभएको होला। रिचार्ज कार्डमा सिल्भर नाइट्रो अक्साइड नामक रसायन हुने र यसले छालाको क्यान्सर हुन्छ भन्ने हल्लाले गर्दा नै सिक्काको प्रयोग गर्नेहरु धेरै छन्। के हो त यथार्थ? मैले यस संबन्धमा गुगलमा सर्च गर्दा यस्तो तथ्य थाहा पाएँ।
Continue reading के रिचार्ज कार्ड नङले कोर्दा क्यान्सर हुन्छ? →
जोया प्रती जुन भाव जागेको छ, सबै विदेशी पाहुना प्रती जागोस
August 17, 2016 Tourism, Uncategorizedजोया, नेपाली पर्यटन क्षेत्रMahesh
फिलिपिनो महिला जोयाले नेपाली श्रीमानको कारण नेपालमा पाएको दु:खको बारेमा समाचार पढेपछी सबैमा संवेदनशीलता जागेको छ। एक विदेशी महिलाले नेपालमा यस्तो दु:ख पाउँदा ३ करोड नेपाली कै बेइज्जत भएको महशुस गरेका छौं। जोया नेपालकी बुहारी हुन्, उनले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने बिचार धेरैमा छ। म यी सबै भावनाहरुलाई सम्मान गर्छु।
तस्बिर: फेसबुकबाट साभार
तर, के मिडियामा आएकी विदेशी महिला जोया प्रती मात्र सिमित हो त हाम्रो संवेदनशीलता? के अन्य विदेशी पर्यटकहरू प्रती पनि हामी उत्तिकै संवेदनशील छौं त? Continue reading जोया प्रती जुन भाव जागेको छ, सबै विदेशी पाहुना प्रती जागोस →
BibekSheel Nepali Professional Help Desk सँगको अनुभव
August 16, 2016 Entrepreneurship, Uncategorizedhelp desk, professionalMahesh
हालसालैको कुरा हो, कम्पनी दर्ता गर्न मलाई जरुरी document बनाउन professional सहयोग चाहिएको थियो। र कोबाट कसरी सहयोग पाउने भन्नेमा अलमल्ल थिएँ।
केहि दिन तनावमा झुलेपछी मलाई BibekSheel Nepali Professional Help Desk को बारेमा Tina Bhattaraiजी सँग भएको कुराकानी याद आयो। मैले तत्काल professional help को लागी यो डेस्कमा message पठाएँ। केही घण्टापछी मलाई message को reply आयो, Continue reading BibekSheel Nepali Professional Help Desk सँगको अनुभव →
२०२० सम्ममा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग बनाउन हामी सबै जुटौं
August 15, 2016 Development, UncategorizedSigatse- Kathmandu Railway, सिकाग्से काठमाडौ रेलमार्गMahesh
चिनसँग भएको रेलमार्ग तथा कनेक्टिभिटी विस्तार संबन्धी संझौता अनुसार चिनले तिब्बतको दोस्रो ठुलो सहर सिगात्सेसम्म जोडेको रेलमार्गलाई सन २०२० सम्ममा केरुङ नाकासम्म जोड्ने निति लिएको छ। हालसालै भएको प्राविधिक अध्ययनले सिगात्से-काठमाडौ रेलमार्गमा १०० किलोमिटर प्रती घण्टाको गतीमा रेल कुद्न सक्ने देखाएको छ। चिनले आफ्नो काम गर्नेछ नै। अबको महत्वपूर्ण कुरा नेपालको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम अर्थात काठमाडौ-केरुङ रेलमार्ग २०२० सम्ममा तयार पार्न हामी तत्पर छौं त भन्ने हो।
साभार: CRI Nepali Service
हालै मिडियामा आएको समाचार अनुसार काठमाडौ-केरुङ रेलमार्ग निर्माणको लागी करिव ३ खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ। धेरै जसो ठाउँमा सुरुङमार्ग Continue reading २०२० सम्ममा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग बनाउन हामी सबै जुटौं →
म संसदीय सर्वोच्चता सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छु
August 14, 2016 Politics, UncategorizedMahesh
म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपको पक्षमा छु। र यसको साथै संसदीय सर्वोच्चता प्रतिको मेरो आश्था पनि मजबुत छ। यस संबन्धमा मेरो स्पष्ट धारणा यस प्रकार छ:
* प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था किन त?
कार्यपालिका (सरकार)लाई स्थिर र जनभावना बमोजिमको बनाउनको लागी
* प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा संसदीय सर्वोचता कसरी रहला? Continue reading म संसदीय सर्वोच्चता सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छु →